Malunga Nathi-Fuzhou Brighter Electromechanical Co., Ltd.
I-Fuzhou Brighter Electromechanical Co., Ltd. ngumvelisi owaziwayo wenqaba yokukhanya ephathwayo enobuchule bophando kunye nophuhliso kunye nezakhono zemveliso.Ukusukela ekusekweni kwayo, inkampani ibambelele kwifilosofi yeshishini lokuthembeka, ubuchwephesha, ukusungula izinto ezintsha kunye nokugqwesa, kwaye uzibophelele ekudaleni iimveliso zokukhanyisa ezikumgangatho ophezulu.
Okwangoku, uchungechunge lwe-lighthouse yeselula, uchungechunge lombane oluphuthumayo oluphuthumayo, impompo yamandla kaxakeka kunye nezinye iimveliso eziveliswa yinkampani zisetyenziswa kakhulu ziinkampani zamandla, izikhululo zeenqwelo moya kunye namasebe omkhosi, kwaye ezinye zeemveliso zithengiswa e-Australia naseMbindi Mpuma.
Inkonzo yokwenziwa ngokwezifiso kwemveliso yeyona nto iphambili kukhuphiswano lweshishini, zonke iimveliso zethu zithathwe kukulungelelaniswa abathengi.Kubandakanya ukuphakama okwahlukileyo kommandla wethafa, ubushushu obuphezulu, ukufuma okuphezulu kunye nommandla wesiqithi setyuwa eninzi, ummandla onomkhenkce weAlpine, njl njl. ingasetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo lwamandla, ulwakhiwo lukaloliwe, ulwakhiwo lwendlela, ukwakhiwa kwemigodi, ukukhanya kwesikhululo seenqwelomoya, ukukhanya kwebala elikhulu, ukukhanya komda wesiqithi, i-oyile kunye ne-oyile Wells, ishishini lemichiza, ukhuseleko loluntu, umlilo, ulawulo lwezikhukhula, ukuthintela intlekele kunye nokunciphisa, unxunguphalo. ukuhlangula kunye namanye amasimi amaninzi.
Iyunithi yamandla kunye nezinye iinxalenye eziphambili zeemveliso eziveliswe yifektri yethu ubukhulu becala zenziwe ngeempawu zamazwe ngamazwe kunye nezasekhaya ezidumileyo ukuqinisekisa umgangatho kunye nokuthembeka kweemveliso.Kubota, Perkins, Kohler, Yanmar, Yangdong, Honda, Sinocox, Meccalte, Stamford , Leroysomer, Smartgen brand ngamaqabane ethu.
IiMveliso zeBrighter kunye neeFactory
Iimveliso zethu ziye zaphumelela ngokuphindaphindiweyo ukubhida okubalulekileyo, kwaye zafumana udumo kushishino lwamandla, ulawulo olungxamisekileyo lwesizwe kunye nokhuselo lomda wesiqithi kunye namanye amacandelo abalulekileyo.
Kwinkqubo yophuhliso lwemveliso kunye nokutsha, iBrighter Electromechanical Co., Ltd. ifikelele kwintsebenziswano enzulu kunye ne-Shenzhen Lehui Optoelectric Technology Co., Ltd. ngo-2017, kwaye yaba yi-subsidiary.Relying yayo eqinile yobugcisa kunye nokukwazi ukuphuhlisa imarike, inkampani yethu ngokukhawuleza yaba namandla amatsha abalulekileyo kushishino lweemveliso zikaxakeka zasekhaya.
Inkonzo yokuqala, umgangatho uyinkosi ithathwa njengeyona nto ingundoqo kwinkcubeko yethu yenkampani.Ngokufika kwexesha elitsha, kunye nokuthembeka kunye nomgangatho wemveliso njengenkxaso yeFuzhou Brighter Electromechanical Co., Ltd. iya kwenza inkqubela phambili enkulu, ikhwele i umoya,